आज पाँचौ राष्ट्रिय कर दिवस, चिन्नुहोस् नेपालका ठूला करदातालाई ! - Arthatantra.com
आज पाँचौ राष्ट्रिय कर दिवस, चिन्नुहोस् नेपालका ठूला करदातालाई !
काठमाण्डौं । सरकारले पाँचौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आज राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान गरेका हुन् ।
व्यक्तिगतरुपमा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ शम्शेर जबरा सम्मानित भएका छन् ।
त्यस्तै सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालि भएको छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निर्यातकर्ता डाबर नेपाल र सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा युनिलिभर प्रालि सम्मानित भएका छन् ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा ओम फिड इन्ट्रष्ट्रिज पनि उत्कृष्ट करदाताबाट सम्मानित भएको छ ।
यसैगरी सहकारीतर्फ राष्ट्रिय सहकारी बैंक, लघुवित्त तर्फ छिमेक लघुवित्त विकास बैंक र बैंकतर्फ नबिल बैंक पनि उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मानित भएका छन् । यसैगरी वीमातर्फ लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन, रेमिटेन्स तर्फ आइएमइ र पर्यटन तर्फ तारागाउँ होटल लिमिडेट सम्मानित भएका छन् ।
सेवातर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नेपाल टेलिकम पनि सम्मानित भएको छ । त्यस्तै व्यापारतर्फ सिप्रदी ट्रेडिङ पनि उत्कृष्ट करदाताबाट सम्मानित भएको छ । ५ करोडसम्मका साना करदातामा साङ्ग्रिला इनर्जी लिमिटेड र ५ करोडदेखि ४० करोडसम्म मझौला करदाताको रुपमा शिवेक हस्पिटल सम्मानित भएका छन् ।
१ मंसिर २०७३, ११।३०